मेयरको सपना ‘क्यासिनो सिटी’ – sunpani.com
मेयरको सपना ‘क्यासिनो सिटी’
नेपालगञ्ज – नेपालगञ्जका मेयर डा. धवलशमशेर राणाले नेपालगञ्जलाई क्यासिनो सिटी बनाउने बताउदै आउनु भएको छ । उहाँले त्यो सपना देख्नु भएको छ ।
नेपालगञ्जमा अहिले चार वटा क्यासिनो छन् । ठूल्ठूला होटल खुलेसँगै क्यासिनोको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ । सीमावर्ती शहर भएकाले भारतीय शहरी लखनऊसम्मका व्यापारीहरु क्यासिनोमा रमाउन आउने विश्वास गरिन्छ । मेयर राणाले भन्नुभयो, नेपालगञ्जमा थप ७÷८ वटा क्यासिनो खुल्दैछन् । क्यासिनोको शहर बनाउने अभियान जारी छ ।’
मेयर राणाले नेपालगञ्जमा जडान गरिएको हाइमास्ट लाइट (बत्ती)लाई क्यासिनो सिटीको सपनासँग जोड्नु भएको छ । नेपालगञ्जमा थप ३९ वटा हाइमास्ट जडान गरिदैछ । त्योमध्येमा १३ वटा सुर्खेतरोडमा र बाँकीलाई अन्यत्र जोडिदैछ । यो वर्षभित्र नै सबै ठाउँमा हाइमास्ट जडान गर्ने उपमहानगरपालिकाको तयारी रहेको छ ।
नेपालगञ्जका चोकचोकमा हाइमास्ट लाइट जडानका लागि खाल्टो खनिएको छ । तर, ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम नगर्दा अलपत्र परेको छ । नगरका आठ ठाउँमा हाइमास्ट जडानका लागि ४० लाख आएकोमा त्यो फ्रिज भइसकेको छ । खाल्टो खनेका ठेकेदारले काम गर्न सकेनन् । पैसा फिर्ता गयो । अब कसरी मिलाउने उपमहानगरपालिकाले नयाँ जुक्ति निकाल्ने तयारीमा छ । मेयर राणाले नयाँ ठेक्का दिंदा खाल्टो खनेको पैसा पुरानो ठेकेदारलाई दिने गरी काम गर्ने रणनीति बनाउनु भएको छ । ‘उसले पनि केही काम गरेको छ । घाटा लगाइदिनु हुँदैन, काम गरे अनुसारको पैसा दिने तयारीमा छौं, मेयर राणाले भन्नुभयो ।
के साँच्चै मेयर राणाले भनेजस्तो नेपालगञ्जलाई क्यासिनो सिटी बनाउन सम्भव छ ? क्यासिनो सिटी हुँदा हुने फाइदा र बेफाइदा के–के हुन सक्छ ? बहसको विषय बनिसकेको छैन । मेयरका समर्थकले राम्रो भनिरहदा केहीले नकारात्मक टिप्पणी गरिरहेका छन् । जुवा खेलाएर शहरको विकास हुन्छ ? भन्न थालेका छन् ।
मेयर राणाले क्यासिनो सिटी बनाउदा नेपालगञ्जको आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने बताउनुभयो । ‘नेपाली जान पाउदैनन्, विदेशीको पैसा नेपालगञ्जमा आउने हो । यसले यहाँको विकासमा टेवा पुग्छ, मेयर राणाले भन्नुभयो, यसले नेपालगञ्जको छुट्टै पहिचान स्थापित हुन्छ ।’
नेपालगञ्जलाई क्यासिनो सिटी बनाउदा पश्चिम नेपालमा आउने ठूलो संख्याका पर्यटकलाई नेपालगञ्जमा अड्याउने सकिने विश्वास गरिएको छ । नेपालगञ्ज पश्चिमको पर्यटकस्थलहरुको ट्रान्जिट प्वाइन्ट मानिन्छ । क्यासिनो सिटीले पर्यटन व्यवसायमा पनि सघाउ पुग्ने मेयर राणाले विश्वास गर्नु भएको छ । क्यासिनो सिटी बनाउदा रातभरी झलमल चाहिन्छ । त्यसको शुरुवात शहरमा हाइमास्ट जडान गरेर शुरुवात गरिदैछ ।